Symbolset - လူမှုကွန်ယက်အိုင်ကွန်များကိုဤ ၀ က်ဘ်အက္ခရာပါသောမည်သည့်ဆိုက်တွင်မဆိုထည့်ပါ။ | Martech Zone
Symbolset - လူမှုကွန်ယက်အိုင်ကွန်များကိုဤ ၀ က်ဘ်အက္ခရာပါသောမည်သည့်ဆိုက်တွင်မဆိုထည့်ပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 31, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တိုင်းနီးပါးသည်လူမှုရေးကိုအသုံးချသည် icons များ သူတို့ရဲ့တွစ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ LinkedIn နဲ့အခြားလူမှုရေးလိပ်စာများကိုဝက်ဘ်ပေါ်မှပြသရန် မျက်မှောက်ခေတ် browser (ဘရောက်ဆာ) များသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်၏ဒီဇိုင်းတွင်အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နိုင်သောဖောင့်များကိုထည့်သွင်းရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
ကျနော်တို့ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့လှပသော client ကို site ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည် Ka + A, အလွန်အောင်မြင်သောအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများစွာနှင့်ပူးပေါင်းပြီး…သူတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုဖြန့်ကျက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်၊ ဒီဇိုင်နာတွေဟာလှပတဲ့ site တွေတည်ဆောက်ရုံသာမကလှပတဲ့ code တွေရေးကြတာကြောင့်လည်းဒါဟာအံ့သြစရာပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများက LinkedIn ပုံရိပ်နှင့်သူတို့၏ site ၏ညာဘက်အောက်ခြေသို့ link ထည့်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အနီးကပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါကပုံရိပ်တစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ၎င်းသည်တွစ်တာနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုဖော်ပြနေသည့်ဖောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်! မြန်ဆန်စွာ hacking လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Symbolset မှလူမှုရေး icon များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည်။
အထွေထွေ semantic သင်္ကေတဖောင့်ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်ခေတ်သစ် browser များနှင့် OpenType ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဒါကမယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးရှိစွာပါ! ဥပမာအားဖြင့် hover ကဲ့သို့ fonts များကိုအရွယ်အစားပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ မည်သည့်အရောင်မျိုးမဆို၊ CSS မှတစ်ဆင့်အခြား stylings များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ နှင့် fonts မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်စွာ load ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်နာသည်အခြားအရောင်များ၊ အရွယ်အစားနှင့်စတိုင်တူသောလူမှုရေးသင်္ကေတအသစ်များကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ခဲ့ပါ။ LinkedIn ပုံသင်္ကေတအတွက် HTML ကုဒ်ကိုအသုံးပြုပြီး anchor tag နဲ့ပတ်ပြီးရှင်းလိုက်ရတယ်။
Social Symbolset သည် ၃ ဒေါ်လာသာရှိပြီးလက်ရှိလူမှုရေးသင်္ကေတများနှင့်ပါလာသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအေးမြအကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် KA + A မှ Kudos ။ Symbolset icon များကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်များတွင်ထည့်သွင်းရန်အခြားအခွင့်အလမ်းများစွာတွေ့ရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။ နောက်ဆုံးမှတ်စုတွင်၎င်းတို့တွင် Social Icons မရှိပါက၎င်းတို့တွင်အခြားဖောင့်များ… er …သင်္ကေတများစွာရှိသည်။
Tags: facebook အိုင်ကွန်google plus သင်္ကေတလိပ်စာအိုင်ကွန်လူမှုရေး icon များtwitter အိုင်ကွန်